အကူအညီ - Ningbo Taili အပိုဆုသွင်းကုန်နှင့်ပို့ကုန် Co. , Ltd မှ
သငျသညျ OEM & လိမ္မော်ရောင်ပွုနိုငျသနညျး
ဟုတ်ကဲ့ကျနော်တို့ကသူတို့တောငျးဆိုခကျြအပျေါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ client များအတွက်မူရင်းပစ္စည်းထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်မူရင်းဒီဇိုင်းထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းကိုကိုင်တွယ်။ အမိန့်အရေအတွက်တော်ကြီးမားသည်လျှင်, ငါတို့သည်အမှတ်တံဆိပ်အပါအဝင်, သင့်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ထည့်သွင်းခြင်းသို့မဟုတ်တောင်မှသင့်ရဲ့သတ်မှတ်ချက်များနှင့်တွေ့ဆုံရန်ထည်သို့မဟုတ်ပစ္စည်းပြောင်းလဲနိုင်သည်။ ငါတို့သည်သင်တို့၏လိုအပ်ချက်များကိုကိုက်ညီဖို့စိတ်ကြိုက်ဖြစ်ကြောင်းထုတ်ကုန်ဒီဇိုင်းနှင့်ထုတ်လုပ်ရန်သင်နှင့်အတူအလုပ်လုပ်ပါလိမ့်မယ်။
shipping အဆသင့်တည်နေရာပေါ် မူတည်. ကွဲပြားပါလိမ့်မယ်:
အက်စ်အမိန့်အမြန်ပေးပို့ဘို့ 3-5 စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရက်ပေါင်းကြာမြင့်မည်
ဥရောပအမိန့်ကိုကယ်နှုတ် 1-5 စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရက်ပေါင်းကြာမြင့်မည်
သည်အခြားနိုင်ငံတကာအမိန့်ကယ်လွှတ်ခြင်းငှါ 6-20 စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရက်ပေါင်းကြာမြင့်မည်
အခွန် / Duty
ယူနိုက်တက်စတိတ် FedEx သို့မဟုတ် USPS (လက်မှတ်မလိုအပ်စေခြင်းငှါ) 3-5 စီးပွားရေးနေ့ရက်များ သာ, CA & PA ဆိုပြီးတရားစွဲဆို
ကနေဒါ USPS ဦးစားပေးနှင့်ကနေဒါ Post ကို 5-15 စီးပွားရေးနေ့ရက်များ နိုင်ငံအားဖြင့်တရားစွဲဆို
ဥရောပသမဂ္ဂ (အီးယူ) DHL Express ကို * / GLS 1-5 စီးပွားရေးနေ့ရက်များ VAT ကိုရှေ့ပြေးအားသွင်းပြီး
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ USPS ဦးစားပေး / DHL Express ကို * / ဟောင်ကောင် Post ကို Speedpost 6-20 စီးပွားရေးနေ့ရက်များ နိုင်ငံအားဖြင့်တရားစွဲဆို
ယခုကြှနျုပျတို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသစ်ကရေကြောင်းပံ့ပိုးပေးအဖြစ် DHL ကိုအသုံးပြုပါ။ အများစုမှာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအမိန့်ယခုသည်အလွန်သင့်ရဲ့အမိန့်များအတွက်ရေကြောင်းကြိမ်အလျင်စလိုတံ့သော (ရရှိနိုင်ပါစတော့ရှယ်ယာနှုန်းကဲ့သို့) ဟောင်ကောင်သို့မဟုတ်နယ်သာလန်အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဂိုဒေါင်ကနေတင်ပို့ပါလိမ့်မည်။
နိုင်ငံတကာအမိန့်: အလွန်ရှားပါးအခါသမယတွင်, အချို့နိုင်ငံများတွင်နိုင်ငံတကာရေကြောင်းထိုကဲ့သို့သောသြစတြေးလျ, ဘရာဇီး, မက္ကစီကိုနှင့်ရိုမေးနီးယားအဖြစ်အချို့သောနှေးကွေး-to-သင်္ဘောနိုင်ငံများအဘို့အပိုရှည်ပင် 4-8 ပတ်ကြာယူသို့မဟုတ်နိုင်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ဦးတည်ရာကိုနိုင်ငံ၏အကောက်ခွန်ရှင်းလင်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်များကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ဆိုနှောင့်နှေးတာဝန်ရှိသည်မဟုတ်ပါ။
အမရေိကနျပွညျထောငျစု၏နယ်မြေများ: ငါတို့သည်, သင့် destination သို့ရောက်ရှိဖို့ရန်သင့်အမိန့်များအတွက်ဘယ်နေရာမှာမဆိုအကြား 5-15 စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရက်ပေါင်းခွင့်ပြုပါကျေးဇူးပြုပြီးမှတင်ပို့ကြောင်းအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတစ်ရပ်ကွက်မှာနေထိုင်တဲ့သူတွေအတွက်။
သင့်ရဲ့လိုအပ်ချက်အပေါ် မူတည်. များစွာကိုတွန်းလှည်းအမျိုးအစားများကိုဆက်ကပ်။ သငျသညျထိုကဲ့သို့သောမွေးကင်းစကလေးငယ်တစ်ဦး pram တစ်ရိုးရှင်းသောတတ်နိုင်ကျစ်လစ်သိပ်သည်းတွန်းလှည်း, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ High-end ဇိမ်ခံတွန်းလှည်းထဲကတစ်ခု, ဒါမှမဟုတ်တစ်ဦးတွန်းလှည်းပါဝငျသောပြည့်စုံတွန်းလှည်းခရီးသွား set ကိုကားထိုင်ခုံများနှင့်အပြည့်အဝလိုင်းအဖြစ်ပစ္စည်းများကျယ်ပြန့်ခြင်းမှရွေးနိုင်သည် ထိုကဲ့သို့သောနှီးအိတ်အဖြစ်ဆက်စပ်ပစ္စည်း, ခွက်ကိုကိုင်ဆောင်သူကားထိုင်ခုံ adapter, ခေါက်ခုတင်သယ်ဆောင်နှင့်ခြင်ကြော့ကှငျး။
ဟုတ်ကဲ့ - ကျွန်တော်မာခ်အသိအမှတ်ပြုခြင်းနှင့်အမြင့်ဆုံးဘေးကင်းလုံခြုံမှုစံချိန်စံညွှန်းများနှင့်တွေ့ဆုံရန်နေကြသည်။
မေးခွန်းတစ်ခုရှိပါသလား? ဂရိတ်။ ငါတို့သည်သင်တို့7ရက်တစ်ပါတ်ကိုကူညီနှင့် 24 နာရီအတွင်းတုံ့ပြန်ရန်ဒီနေရာကိုဖြစ်ကြသည်။ Plus အား, သင်ညာဘက်ဒီစာမျက်နှာပေါ်တွင်သင်၏မေးခွန်းများကိုဆုံးအဖြေကိုရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။